गैर आवाशीय नेपाली संघ पोर्चुगलको छैठौँ बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०९:४४ English
गैर आवाशीय नेपाली संघ पोर्चुगलको छैठौँ बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
बिनोद घिमिरे, लिस्बोन । गैर आवाशीय नेपाली संघ पोर्चुगलको छैठौँ बार्षिक साधारण सभा आइतवार पोर्चुगलको लिस्बोनमा सम्पन्न भएको छ । प्रमुख अतिथि तथा नेपाली दुतावास फ्रान्सका महामहिम राजदुत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले सभालाई सम्बोधन गर्दै लिस्बोनमा कन्सुलेटको स्थापनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न देशका कन्सुलेटको स्थापनाका लागि एकै पटक निर्णय गर्ने भएकोले ढिला भएको बताउनु भयो । पोर्चुगलका नेपालीहरुको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै आफुले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले दुतावासमा हुने गरेका ढिलासुस्ती र कमीकमजोरी रहेमा सिधै आफुलाई सम्पर्क गरि समस्या बताउन पनि आग्रह गर्नु भयो ।
संघका सल्लाहकार डा. महेन्द्र पन्थीले ईमिग्रेसन सम्बन्धि नयाँ नियमहरु आउन लागेकोले हालैका दिनहरुमा केहि कडाई गरिरहेको बताउनु भयो उहाँले सबैलाई सजग रहन समेत अनुरोध गर्नु भयो । साथै उहाले पोर्तोको डिपोर्ट सेन्टरमा रहेका दुई नेपाली हरुको कानुनी प्रक्रिया र अवस्था बारे जानकारी दिनु भएको थियो । नेपाली कन्सुलर डा। मारिया तेरेजाले नेपाल र नेपालीको सेवा गर्न पाउदा हर्षित रहेको बताउनु भयो । कन्सुलेटबाट हुने कामहरुलाई सहज बनाउन आफु बाधक नहुने समेत बताउनु भयो ।
साधारण सभामा हेमन्त सेढाई, भिम केसी कमल, राम बहादुर गौचन, बालाराम बिक, मान बहादुर पुर्जा, गणेश लिम्बु, लक्ष्मी प्रसाद सापकोटाले मन्तब्य राख्नु भएको थियो । सबै जसो बक्ताहरु साधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिदै संघ ले संचालन गरेका गतिबिधि हरु प्रसंशा गर्दै कमीकमजोरी हटाउदै जानु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
सामुहिक लागनी नामक सेशनको अध्यक्षता गर्दै एनआरएन अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति का सदस्य पूर्ण हमालले एन आर एन आईसीसीले अघि सारेको जल बिद्धुत क्षेत्रमा सामुहिक लगानी कार्यक्रम मा पोर्चुगलबासी नेपालीहरु लाई लगानीका लागि आमन्त्रण गर्नु भएको छ । यो क्षेत्र बिश्वाशिलो र मुनाफा योग्य भएकाले ढुक्क भएर लागनी गर्न आब्हान गर्नु भयो । उक्त सेशनमा भिम केसी कमलले सामुहिक लगानी कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
संघका सचिब सोनाम योन्जन लामा ले कन्सुलेटमा डकुमेन्ट लैजाने क्रममा आउने समस्या लगायतका बिषय मा बिबिध जानकारी दिनु भएको थियो । सचिब नबिन गौतमले बार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र अमगाई ले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो । संघका अध्यक्ष रमेश कुमार गुरुङ को अध्यक्षता सम्पन्न साधारण सभामा उपाध्यक्ष डिल्लीराम चापागाईले स्वागत गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रम सचिन नविन गौतम ले संचालन गर्नु भएको थियो ।
२५ असार २०६९, सोमबार १८:२७ मा प्रकाशित